हामी फागुनमै विकास निर्माणका सबै काम सक्छौँ छत्रपति प्याकुरेल, प्रमुख-फुङ्लिङ् नगरपालिका, ताप्लेजुङ
जनतापाटी बुधवार, माघ २९, २०७६, १२:५२:०० मा प्रकाशित
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहमा अहिले ७ सय ५३ सरकार छन् । त्यसको एक तिहाई बढी हिस्सा नगरपालिकाले ओगटेका छन् । अर्थात्, महानगर, उपमहानगरसहित नेपाल भरी अहिले २९३ नगर सरकार छन् । तीन तहको राज्य संरचनामा सबैभन्दा बढी अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै छ । भन्नलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुगेको भनियो । तर, अहिलेसम्म पनि स्थानीय सरकारले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नै पाउन सकेनन् । जुन गुनासो पाँच वर्ष पहिले गठन भएको फुङलिङ नगरपालिका अहिले पनि गरिरहेकै छ । २०७१ साल बैशाख २५ गते गठन भएको नगरपालिका हो, फुङलिङ । साविक ताप्लेजुङ नगरपालिकाको नाम परिवर्तन भई फुङलिङ राखिएको छ । हामीले यही नगरपालिकाका नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
सन्चै हुनुहुन्छ, मेयरसा’व ?
–आरामै छुँ ।
कुरो बजेटबाट सुरु गरौँ, यो वर्ष जम्माजम्मि बजेट कति हो–फुङलिङको ?
–ट्याक्कै अंकै भन्नु पर्ने हो ?
भन्दिनु भए जाती...
–५३ करोड ७७ लाख २७ हजार ३३४ रुपिँया हो, हाम्रो बजेट यो आर्थिक वर्षलाई ।
त्यसमा पुँजीगत कति ?, चालु खर्च कति ?
–पुँजीगत १६ करोड २८ लाख ५५ हजार र चालु खर्च ३७ करोड ४९ लाख ।
प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रम ?
–अब हेर्नुस् न, हामी पूर्वी नेपालको पनि पहाडी जिल्लाको नगरका मान्छे । हुनलाई यो बेला हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हो । तर, ठ्याक्कै उल्टोमा पो छौँ हामी ।
–बाटोघाटो बनाउनमै बजेट गइराख्या छ, हौ ।
नगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म बाटै नबन्या ?
–बाटो छ । तर, स्तरोन्नति भएको छैन । ११ वटै वडामा बाटो पुगेको छ । १० नम्बर वडाको भने टोलटोलसम्म बाटो पुग्न बाँकी छ ।
सबै भन्दा ठूलो योजना ?
–हेलिप्याडदेखि बसपार्कसम्म जाने १३ सय मिटर बाटो पीच भएको छ । जसको बजेट थियो ५ करोड । अहिले त्यो काम सम्मपन्न भएको छ ।
एउटा मात्रै हो ठूलो योजना ?
–हैन, नगरपालिकाको भवन निर्माण छ, ५ करोड ३२ लाखको । त्यो बहुवर्षीय भएका कारण यो पल्टको ठूला योजनामा नसमेटिएको । २ वर्षमा निर्माण सक्ने कुरा छ । ठेक्का भइसकेको छ ।
अरु योजना चाँहि कस्ता छन् ?
–१ नम्बर वडामा ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम छ, २२ लाखको । यस्तै, २२ लाखकै मोटरबाटो स्तरोन्नतिको कार्यक्रम छ । ५ लाखदेखि १५ लाखसम्मका बाटो बनाउने कार्यक्रम धेरै छन् । ती सबै सम्पन्न हुने क्रममा छन् । हामीले एउटा महत्वपूर्ण संग्रहालय बनाउँदै छौँ, ५२ लाखमा–‘बहुसाँस्कृतिक संग्रहालय । सुकेटारभन्दा मुन्तिर । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जग्गा खरिदको मूल्याङ्न प्रस्ताव पेश गरिसकेका छौँ । दिवंगत पूर्व पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नाममा रवीन्द्र पार्क बन्दैछ, गोरुजुरेमा । त्यसको बजेट छ, ५० लाख । यो सशर्त अनुदान अन्तर्गत हो । र, यसका लागि भद्रपुरमा रहेको सहरी विकासले २० लाख छुट्याएको छ । र, यो वर्ष खर्च हुन्छ ।
प्रदेशले बजेट दियो कि दिएन ?
–प्रदेशबाट १ करोड आएको छ, बाटोका लागि । हामीले त्यसमा ३० लाख हालेर १ करोड ३० लाखमा बाटो बनाउँदै छौँ । यस्तै, संघले पनि सहरी विकासमार्फत ४०–४० लाखका दुईवटा बाटो बनाउन बजेट दिएको छ ।
अनि, ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराई त मन्त्री हुनुहुन्छ, सांसद पूर्वाधार साझेदारीको बजेट पाउनु भयो ?
–पाइयो । ८५ लाख उहाँले ठूलो बाटोका लागि दिनु भएको छ । त्यसमध्ये ५० लाखको टेण्डर नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हामीले पनि बजेट हाल्छौँ । यस्तै, माननीयज्यूले २५ लाख, १९ लाख गरेर अन्य बाटोलाई पनि दिनु भएको छ । यो साझेदारी कार्यक्रम भएकाले हामीले पनि बजेट हाल्छौँ ।
सामाजिक विकासका कार्यक्रम छैनन् ?
–छन्, खानेपानी र सरसफाइका लागि ९१ लाख ७६ हजार बजेट छ । यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका लागि ४ करोड ५९ लाख ८८ हजार बजेट छ ।
विकास बजेट कहिलेसम्म खर्च भइसक्छ ?
–हामी फागुनमै लगभग खर्च गरी सक्छौँ । धेरै जसो योजनाका काम सकिएका छन् । अब सांसद पूर्वाधार कार्यक्रम र प्रदेश र संघले दिएका कार्यक्रम पूरा हुन बाँकी छन् । हामी कुनै पनि काम असार मसान्तसम्म लादैनौँ ।
अनि, भ्रमण वर्ष चलिरहेको छ, कार्यक्रम के छन् त ?
–पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति र उद्योग वाणिज्य संघ लगायतसँग मिलेर हामी संयुक्त कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । फागुन ९ देखि १२ सम्म हामी मेची पर्यटन तथा पाथीभरा महोत्सव नै गर्दैछौँ । त्यसमा मेयर कप राखिएको छ । अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि छन् ।
संघ सरकारप्रति कुनै गुनासो छ ?
–सबै भन्दा ठूलो गुनासो कर्मचारीकै हो । अहिलेसम्म हामीकहाँ शाखा अनुसार कर्मचारी नै छैनन् । कर्मचारीको व्यवस्था चाँडै भए असाध्यै राम्रो हुनेथियो । र, अर्को चाँहि हामीलाई बजेट थोरै दिने क्या ! राजस्व बाँडफाँडको जम्मा ७ करोड छ । विभिन्न अनुदान गर्दा त्यही ५३ करोड रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भयो । बाटो खनिन्छ, तर त्यसको स्तरोन्नतिका लागि पुल, कल्भर्ट बनाउन हामीले सक्दै सक्दैनौँ । पुँजीगत १६ करोडले कसरी पुल वा कल्भर्ट बनाउने ?
पत्रपत्रिकामा आजः ओलीको योजना-प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष, पोखरेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणबारे चिकित्सकसँग परामर्श भइरहँदा नेकपाको उच्च तहमा पार्टी र सरकारको जिम्मेवारीबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । प्रत्यारोपणको विकल्प रोज्दा कम्तीमा तीनदेखि पाँच महिना पूर्ण रूपमा आराममा बस्नुपर्ने भएकाले ओलीले जिम्मेवारी पनि हस्तान्तरण गर्न थालेका हुन् । प्रारम्भिक सहमति भएपछि यो विषयमा सचिवालयबाटै निर्णय गर्ने तयारी छ । ५ भदौमा ओली सिंगापुर जाँदा बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षका रूपमा कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिएको थियो । आइतवार, मंसिर १, २०७६, ०७:२२:००
नायिका स्वस्तिमा खड्का बनिन् बेस्ट परफर्मर सोमवार, असार २३, २०७६, १०:३२:००
‘साइलीरीमई’ लिएर आए तेजिन्द्र गन्धर्व मंगलवार, मंसिर ४, २०७५, १५:०८:००